Amagumbi okulala amathathu eLodge enombono weLake Superior
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLaurie
Ifakwe entliziyweni yeLutsen kwiSki Hill Road, le lodge inendawo yokuhlala evulekileyo enophahla oluvalekileyo kunye nendawo entle yomlilo erhangqwe ngamatye. Ubekwe phakathi kwemithi kwindawo ekhuselekileyo nethe cwaka, ukwakwisiqingatha semayile ukusuka kuzo zonke iintshukumo kwiiNtaba zeLutsen. Kweli khaya uya kufumana inqanaba le-2 legumbi lokulala labucala elinebhedi yenkosi kunye nebhafu yabucala. Inqanaba eliphambili linamagumbi okulala ama-2: enye ineebhedi ezimbini ezingamawele kwaye enye ineebhedi ezingama-bunk. Akukho WiFi okanye intambo.
IGrand Marais, i-20 yeekhilomitha ezilula kwaye ezintle ukuya emantla, ifanelekile ukuqhuba. Iivenkile zolonwabo ziquka iPosi yoRhwebo kunye neSivertson Gallery. Zininzi ngakumbi. I-Gunflint Tavern inokhetho oluhle lwebhiya kunye neengcambu zebhiya kwimpompo. Inkampani yokuBiyela iVoyageur yindawo entle yokumisa. Abanye abanakukwazi ukuyiyeka i-Sven kunye ne-Ole's okanye iiDonuts eziBalaseleyo zehlabathi. I-Angry Trout (engavuleki ebusika) nayo ilungile. Kukwakho nethala leencwadi, ivenkile yekofu, ivenkile yokutya, iivenkile ezi-2 zegrosari, ikhemesti, kunye neklinikhi yonyango elungileyo esiye kuyo izihlandlo ezininzi.
I-Tofte, iikhilomitha ezi-8 emazantsi ekhabhini, ibonelela ngeCoho Café ngesonka esihle kakhulu. Imenyu yabo yokutya nayo ilungile. Siyakonwabela indawo yokutyela yaseBlue Fin Bay. Ivenkile yegrosari yaseTofte inokhetho olukhulu kuneevenkile zaseLutsen.
Kwindawo yaseLutsen, sisebenzisa iMakethe yeLockport kwigrosari, ikofu, isidlo sakusasa, izinto ezibhakiweyo, igesi, kunye nezipho ezincinci. Yimayile enye ukuya eGrand Marais. Ngaphaya kwesitrato (Highway 61) uya kufumana i-Clearview General Store kunye neposi kwakunye nevenkile ethengisa utywala. Kukho ivenkile yehardware enye imayile okanye ngaphezulu phezulu kwendlela. Kukho entsha, ivenkile yekofu esemagqabini, iFika, kwisakhiwo saseClearview.
UPapa uCharlie, kwinduli ye-ski, ubonelela ngamava okutyela aqhelekileyo kunye nevenkile yezipho. Kukwakho, ewe, ukutyibiliza ekhephini. Ezantsi endulini echibini yiLutsen Resort, enendawo yokutyela elungileyo, ngakumbi kwisiphelo sokutyela esicolekileyo se-spectrum (njengoko iBlue Fin Bay). Kukwakho nebar epholileyo eyindawo yokutyela ekhululekileyo.
I-Superior Hiking Trail ibonelela ngamava amangalisayo nokuba unyukela phi na kunye naliphi na ixesha lonyaka. Kukho iincwadi ezichaza umkhondo kwi-cabin. I-Lutsen Mountain iqesha izihlangu zekhephu, isibhakabhaka esisezantsi, kunye ne-skis enqumla ilizwe.
Indawo yokuthengisa iwayini ephezu kwenduli eSki Hill Road yavulwa ngo-2016 kwaye inewayini kunye ne-cider enencasa.